ဘာသာရေး – Alanzayar
သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား မိမိအလိုရှိသည်ကိုရည်စူး၍ အထိရောက်ဆုံးပူဇော်နည်းအဓိဌာန် နံနက်မိုးသောက်အခါ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား (၉)ခေါက်ပူဇော်ပါ။ ညဘက်အိပ်ရာမဝင်ခင် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား (၉)ခေါက်ပူဇော်ပါ။ ဤကဲ့သို့နေ့စဉ်ရက်မပျက်စေပဲ ကျင့်ဆောင်သွားပါလျှင် ပြောတိုင်းဆိုတိုင်းအောင်မြင်စေ၏။ ဘေးရန်အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေ၏။ သြဇာအာဏာတည်စေ၏။ သမ္မာဒေဝနတ်များ လောကပါလနတ်ဒေဝါများ အမြဲစောင့်ရှောက်ရ၏။ တစ်ပါးသူတို့က မိမိအားမကောင်းမကြံနိုင်။ ဘေးဘယာရောဂါအနာများ ကင်းပျောက်ရ၏။ အန္တရာယ်ရန်စွယ် အတိုက်အခံကင်းဝေးလိုပါက သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား နံနက်သက်စေ့၊ ညသက်စေ့ပူဇော်ပါဟု ဆရာတို့မိန့်ဆို၏။ …
ဆှမျးတျောစာ စားအပျ မစားအပျလား …. ? ဆှမျးတျောစာ စားအပျ မစားအပျလား …. ? အောကျတှငျ အပွညျ့အစုံကွညျ့ရနျ …. ဆှမျးတျောစာ စားအပျ မစားအပျလား …. ? အောကျတှငျ အပွညျ့အစုံကွညျ့ရနျ …. ဆှမျးတျောစာ စားအပျ မစားအပျလား …. ? အောကျတှငျ အပွညျ့အစုံကွညျ့ရနျ …. ဆှမျးတျောစာ …
ဘုရားကြာကြာမရှိခိုးနိုင်ရင် “နမောတဿ” ရွတ်ပါ..1
ဘုရားကြာကြာမရှိခိုးနိုင်ရင် “နမောတဿ” ရွတ်ပါ ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့ အချိန်မရှိလို့၊ အခါအခွင့်မသင့်လို့ဆိုပြီးဘရက်ရာဇာ၊ပြဿဒါး ရွေးမနေသင့်ပါဘူး။ အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ် သေမင်းခေါ်ရင် အချိန်မရှိသေးလို့ “နေပါဦး”လို့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မအားတဲ့ကြားက ကုသိုလ်ယူနိုင်တဲ့နည်းလေးကို ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါရစေ။ “နမောတဿ၊ ဘဂဝတော၊ အရဟတော၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ” ဆိုတာကိုတစ်မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီး တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး သုံးကြိမ်လောက်ရွတ်ပေးပါ။ အဲဒီထက်အချိန်ပေးနိုင်ရင်တော့ ‌နေ့စဉ်မိမိသက်စေ့အကြိမ်အရေအတွက်ရွတ်ပါ။ အဓိဋ္ဌာန်အနေနဲ့လည်းတစ်နေ့ကို “နမေတဿ” သက်စေ့ရွတ်မယ်ဆိုပြီး အဓိဋ္ဌာန်ပြုရင်လည်း အဓိဋ္ဌာန်ကုသိုလ်ရပါတယ်။ အဓိဋ္ဌာန်ဆိုတာ …
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှ ကိုရင်လေး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှ ကိုရင်လေးသိက္ခာတော်ရဆရာတော်ကြီးလိုမျက်လွှာချကာ ဆုပေးပွဲမှာ အပူဇော်ခံနေတဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရနိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှ ကိုရင် ရှင်ခေမိဿရ ယနေ့ ၂၁-၂-၂၀၂၂ တွင်”ပရိယတ္တိနုဂ္ဂဟ သာသနသိပ္ပံသာမဏေကျော်(တောင်ငူ) တိုက်တွင်းစာမေးပွဲ” ဂုဏ်ထူးဆု နှင့် စာအောင်ဆုရ သံဃာတော်များအားဆုနှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကိုသာသနသိပ္ပံကျောင်းတိုက် တောင်ငူမြို့တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံကျော် …
အိမျစောငျ့နတျ အိမျစောငျ့နတျ ဆိုတဲ့အဓိပျပါယျက Duty ခထြားလို့ စောငျ့တာတော့ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့အိမျကို အမှီပွုပွီးဖွဈနတေဲ့နတျကို အိမျစောငျ့နတျလို့ ချေါတာနျော။ အေး အိမျကိုစောငျ့ရမယျလို့ တာဝနျပေးထားတာလို့တော့ မအောကျမလေ့နေဲ့။ ကုသိုလျကောငျးမှုလုပျပွီးတိုငျး နတျတှကေိုလညျး အမြှဝပေါ။ ကိုယျမမွငျရပမေယျ့လို့ကိုယျ့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အိမျစောငျ့နတျတို့၊ တောစောငျ့နတျတို့ တောငျစောငျ့နတျတို့ဆိုတာ ရှိတယျ။ စောငျ့ဆိုတဲ့အဓိပျပါယျက Duty ခထြားလို့ စောငျ့တာတော့ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့အိမျကို …
မဟာဗောဓိမွိုငျ ဆရာတျောဘုရားကွီး မိနျ့တျောမူသော “အနန်တရတေျော”
မဟာဗောဓိမွိုငျ ဆရာတျောဘုရားကွီး မိနျ့တျောမူသော “အနန်တရတေျော” မဟာဗောဓိမွိုငျ ဆရာတျောဘုရားကွီး မိနျ့တျောမူသော “အနန်တရတေျော”ယနေ့ မွနျမာပွညျမှာ ကနြျောအကွညျညိုဆုံး သံဃာ တျောတဈပါးဖွဈတဲ့ မဟာဗောဓိမွိုငျ ဆရာတျောကွီးပေးတဲ့ အနန်တ ရအေကွောငျးကို မိတျဆှတေို့ အတှ ကျ မြှဝေ ပေးပါရစေ။ အခုအခြိနျ အခါအရ လညျး မြှဝဖေို့ တကယျလို အပျနပေါတယျ။ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ငယျစဉျအခါ အသကျ …
လှိုငျးလုံးတှေ ဘယျလောကျကွီးကွီး တနျခိုးတျောကွောငျ့ ပကျြဆီးသှားခွငျးလုံးဝမရှိတဲ့ စတေီတျော လှိုငျးလုံးတှဘေယျလောကျထနျထနျ တနျခိုးတျောကွောငျ့ ပကျြဆီးသှားခွငျးလုံးဝမရှိတဲ့ စတေီတျောလှိုငျးလုံးကွီးတှေ ဘယျလောကျထနျထနျ ရနှေဈမွှပျခွငျး ပကျြစီးသှားခွငျ လုံးဝမရှိသော အံ့ဖှယျထူးခွား စတေီတျောကွီး ဖွဈပါတယျ။ယနေ့ မွတျရှငျမျောစတေီတျောမွတျကွီး မွငျကှငျးလပေါဗြ။ ပငျလယျရေ ဘယျလိုပငျမွငျ့မွင့၊ျ လှိုငျးလုံးကွီးတှေ ဘယျလောကျ ထနျထနျ ရနှေဈမွှပျခွငျး ပကျြစီးသှားခွငျးအလဉျြးမရှိတဲ့တနျခိုးကွီးလှနျးတဲ့ ထားဝယျမွို့မှ ရှေးဟောငျးသမိုငျးဝငျ စတေီတျောမွတျကွီးဘဲ ဖွဈပါတယျ။လိုငျးဖှငျ့ခြိနျနဲ့ တိုကျဆိုငျသူမြား …
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ….ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ….ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ….ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ အားလုံးအဆင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေးအဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား။ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေလား သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ဘဝမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီလား / စိတ်မပူပါနဲ့ မဟာသမယသုတ်ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ မဟာသမယသုတ်ပ ရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုစ ပူဇော်ကာစမှာ အလွတ်ရစရာမလိုပါဘူး စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပူဇော်တတ်ရင်ပဲ ရနေပါပြီ …